Tulip Fever (2017) – Channel Myanmar
R 2017 105 min Drama
မိဘမဲ့ဖြစ်​တဲ့ ဆိုဖီယာတစ်​​ယောက်​ ကုန်​သည်​ကြီးဖြစ်​တဲ့ ​ကောနယ်​လစ်​ ဆန့်ဗို့ဆီကို မယားငယ်​အဖြစ်​နဲ့​​ရောက်​သွားခဲ့တယ်​.
​ကောနယ်​လစ်​ရဲ့အိမ်​​ဖော်​ မာရီယာက​တော့ ငါးသည်​ဝီလ်​လံနဲ့ချစ်​ကြိုက်​​နေသူဖြစ်​တယ်​.
တစ်​​နေ့​တော့ ​ကောနယ်​လစ်​ဟာ သူနဲ့သူ့မိန်းမရဲ့ပုံတူပန်းချီဆွဲဖို့ ဂျန်​ဗန်​​လော့စ်​ကိုငှါးခဲ့ရာ ထိုပန်းချီဆရာ​လေးနှင့်​ဆိုဖီယာတို့ ချစ်​ကျွမ်းဝင်​ခဲ့ကြပြန်​တယ်​.
အဲ့အချိန်​မှာ ပိုက်​ဆံအချီကြီးမြတ်​တဲ့ကျူးလစ်​ဖူး​တွေကို​ ​လေလံတင်​ပြီး​ရောင်းတာ ​ခေတ်​စား​နေချိန်​ဖြစ်​​တော့ ဝီလ်​လံဟာ မာရီယာနဲ့လက်​ထပ်​ဖို့အတွက်​ ဒီကျူးလစ်​​​ရောင်းဝယ်​​ရေး​လောကထဲကိုဝင်​လာခဲ့တယ်​.
ကံ​ကောင်းစွာဘဲ သူဝယ်​တဲ့ပန်းပွင့်​​တွေထဲမှာ တန်​ဖိုးအရှိဆုံးဘရိတ်​ကာလို့​ခေါ်တဲ့ အနီစင်းပါတဲ့ကျူးလစ်​ပန်းတစ်​ပွင့်​ပါလာခဲ့တယ်​.
ဆိုဖီယာက မာရီယာရဲ့ဝတ်​ရုံကိုခြုံပြီး ပန်းချီဆရာ​လေးဆီသွားတဲ့လမ်းမှာ ဝီလ်​လံက မာရီယာထင်​မှတ်​ပြီးလိုက်​သွားကာ မာရီယာနဲ့ပန်းချီဆရာနဲ့​ဖောက်​ပြန်​​နေတယ်​ဟု အထင်​မြင်​လွဲကာ မိုးပြိုမတတ်​ခံစားခဲ့ရတယ်​.
စိတ်​နဲ့ကိုယ်​နဲ့မကပ်​တဲ့ဝီလ်​လံတစ်​​ယောက်​ အရက်​ဆိုင်​မှာ​သောင်းကျန်းမိပြီး ​ရေတပ်​ထဲ​ရောက်​သွားပါ​လေ​ရော.ထိုအချိန်​ မာရီယာ့မှာ ဝီလ်​လံရဲ့ရင်​​သွေး​လေးကိုလွယ်​ထားရချိန်​ဖြစ်​ကာ ဘာလုပ်​လို့ဘာကိုင်​ရမှန်းမသိချိန်​ ဆိုဖီယာနှင့်​​ပေါင်းမိကာ ဘာ​တွေဆက်​ဖြစ်​မလဲဆိုတာက​တော့….
(ဘာသာပြန်သူကတော့ Htet Thin Zar Maung ပါ)
Source : 1080p BluRay x264-DRONES
Translated by Htet Thin Zar Maung
Option 1 VIP Links 900 MB 720p
Option2yoteshinportal.cc 900 MB 720p
Option3disk.yandex.com 900 MB 720p
Option4upstream.to 900 MB 720p
The Babysitters(2007) 2007
Uncontrolled Love (2016) 2016
Violet Evergarden: The Movie (2020) 2020
All of You(2017)
Blood and Ties ( 2013 ) 2013